Return to Afganistaan
Hey’ado kala duwan ayaa Nederland ka bixiya caawinaad dib u noqosho. VluchtelingenWerk waxa ay xaaladaha dib u noqoshada Afganistaan u aragtaa mid aysan nabadgelyadiisa sugneyn. Taasi awgeed ayeeynaan cawinaadaas u bixinin. Waxaa malaha macquul ah adeegsiga hey’ado kale si aad dib ugu noqoto, iyadoo taa ku xiran nuxurka iyo xaladdaada shaqsiyadeed. VluchtelingenWerk waxa ay kula xiriiri karaan hey’adahaas mid ka mid ah. Adiga ayaa xulanaaya hey’addee ku wanaagsan xaladdaada.
Kabista siismada ah ee dib u noqosho ee Afganistaan waa kuwan:
Waxaa taa barbar socda in aad nidaamka- REAN ka heli karto tusaale ahaan tikid dullimaad iyo lacag dheeraadah (€200 oo qaan gaarka sene, €40 oo ah ilmaha la safraayo).
VluchtelingenWerk Nederland iyaga oo ka amaba qaadayaan brojektiga Met Opgeheven Hoofd 2 (Adigoo Madaxa kuu Taagan Yahay 2) ayeey wadahadal kula gelayaan fursadahaada dib u noqosho ee waddanka aad ka timid sida ay yihiin. Innaga ma bixino hagis dib u noqosho oo Afganistaan ku beegan, balse waxaan kula xiriiri karnaa hey’ado kale.
IOM , Hey’adda Caalamiga ee Haajirka (Internationale Organisatie voor Migratie), waxa ay kuugu caawini karaan marka aad dib u noqoto sidii noloshaada aad dib gacanta ugu dhigi lahayd. IOM waxa ay kaddib dib unoqoshada kuu hirgelin kartaa maalgelin guriyeenta, xirfad barashada ama shirkad. Ma aha in ay ku siinaayaan lacag, ee waxa aad heleysaa nidaamka-dabiiciga ah (qalab ama adeeg) iyada oo lala shaqeeynaayo xafiiska-IOM eek u yaal waaddanka aad ka timid.
WereldTools 2018 – 2021 waxa ay ka qeyb qaatayaasha ku garab galaan sida ay shirkad u gaar ah u bilaabi lahayeen. Dadka ka qeyb gala brojektiga WereldTools (Agabka Aduunyada) waxaa la siinayaa sanduuq qalab ah, agab iyo makiinnado si ay waddanka ay ka yimaadeen sida ugu dhaqsida badan dib u noqoshada keddib ay u shaqeeysan lahayeen. Xafiiska-IOM ee goobtaasi ayaa sanduuq kuu qabanaayo marka u soo gaaro cashuuraha.
Stichting ROS waxayaba badan oo ay leeyihiin waxaa ka mid ah brojektiga Vice Versa 5.0. Brojektigaas waxa aad ka heleysaa garabgal haddii aad iskaada waddanka aad ka timid dib ugu noqoneyso, taasi ook u beegan xaladdaada shaqsig ah. Adiga iyo tababare dib u noqoshada oo waddankaada ka yimid waxa aad isla diyaarineysaan dib u noqoshaadaada waxaad isla sameyneysaan qorshe aayatiinka waxaadna isla qorsheyneysaan isticmaalka lacagaha dib u noqoshada. Waxaa aad qaadan kartaa xirfad barashao ama koorso si keedib dib u noqoshaada aad shaqo u heshid. Keddib dib u noqoshada waxaa ku hagaaya lammaane ku sugan waddanka aad ka timid.
VluchtelingenWerk waxa ay la wada shaqeeyaan hey’ado oo ay siku lammaanan yihiin oo ku siin kara warbixin ku saabsan xaaladda waddanka aad ka timid oo kuna garabgeli kara kuna hagi kara marka aad dib u noqoneyso. VluchtelingenWerk waxa ay xaaladaha dib u noqoshada Afganistaan u aragtaa mid aysan nabadgelyadiisa sugneyn. Markaa kuma lihin lammaane aan wada shaqeyno Afganistaan oo ku hagi kara.
Hey’ado ayaa inta badan ku leh lammaane Afganistaan oo adiga kugu hagi kara dib u noqoshadaada. Si aad u hesho warbixin dheeraad ah la xiriir hey’adahaas ama su’aal taasi hagahaada ee VluchtelingenWerk.